Airbrush ပစ္စည်းများ၊ Airbrush ပစ္စည်းများ၊ Airbrush မိတ်ကပ်၊ အလှအပမိတ်ကပ် - BOLT
Mini Air Compressor Si ပါသော Airbrush မိတ်ကပ်ပစ္စည်း ...
Hot Sale Multi-Purpose Air Brush Compressor ...
Double Action Gravity Feed ပက်ဖြန်းသေနတ် ...
Airbrush အဆင့်ဆင့်မဂ္ဂဇင်းရရှိနိုင် ...
Airbrush Step by Step သည် airbrush အနုပညာရှင်များအားလုံးအတွက်မဂ္ဂဇင်းဖြစ်သည်။ အစပြုသူမှသည်အဆင့်မြင့်အထိ၊ ဂန္ထဝင်လေယာဉ်ကွင်းမှသည်မော်ဒယ်လ်တည်ဆောက်သူ၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဖောက်သည်စကားပြန်အထိပရော်ဖက်ရှင်နယ်သရုပ်ဖော်သူအထိ။ Airbrush Step by Step သည်လက်တွေ့ကျကျ airbrush အကြောင်းအရာများကိုစိတ်ဝင်စားပြီးစိတ် ၀ င်စားသူအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
Harder & Steenbeck: နည်းပညာအသစ် ...
Harder & Steenbeck သည်ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Norderstedt ရှိသူတို့၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများအတွက်မကြာသေးမီကအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာမြင့် CNC စက်သုံးခုသည်သူတို့၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုများစွာတိုးမြှင့်စေရုံသာမကထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းလမ်းအသစ်များကိုလည်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ နေ ...
Iwata ၏အသစ်သော airbrush လမ်းညွှန် - နည်းလမ်း (၄) ခု ...
“ ဆေးမှုတ်ရန်နည်းလမ်း ၄ ခု” - ဤသည်မှာဂျပန်လေယာဉ်ကွင်းထုတ်လုပ်သူ Iwata မှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသဘောတရားအသစ်၏အမည်ဖြစ်သည်။ စတင်တည်ထောင်သူများအတွက်ခက်ခဲသော်လည်းအထူးသဖြင့်အထောက်အကူပြုသည့်ခြေလှမ်းကိုကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဒီမှာရည်မှန်းချက်, g ရန်ဖြစ်ပါသည် ...
ပက်ဖြန်းသေနတ်သည်အရည်အဖြစ် (သို့) ဖိအားများသောလေကိုပါဝါအဖြစ်အမြန်ထုတ်လွှတ်သောပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပက်ဖြန်းတည်ဆောက်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုမော်တော်ယာဉ်အမှုန့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ် OEM အရောင်းမြှင့်ခြင်းစသည့်ကဏ္sprများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
NINGBO BOLT MACHINERY ELECTRONICS & TECHNOLOGY CO ။ , LTD သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး airbrush, air mini Compressors, spray gun, air brush ကိရိယာနှင့်အခြားလေကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအထူးပြုသည်။